शिविरमा मा नेप्च्युन दिन कसरी मनाउन?
नेप्च्युन, को समुद्र र समुद्रहरू शासक को भोज, आधुनिक मा एक लोकप्रिय र परम्परागत पर्व हो स्वास्थ्य शिविरमा। , पानी धेरै समय खर्च गर्न पौडी खेल्न खेल्न र रमाइलो मौका सबै छोराछोरीलाई कसरी पौडी खेल्न थाहा नगर्ने पनि ती प्रसन्न। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो - टिप्पणीमा नेप्च्युन दिन सबैसँग, मजा आनन्दित र व्यग्र थियो भनेर शिविरमा।
छुट्टी लागि तयारी
यो बच्चाहरु एक आश्चर्य आशा गर्नुपर्छ भनेर सम्झनुपर्छ रमाइलो, तयारी मा त सबै तपाईंलाई गोप्य संगठित गर्न आवश्यक छ। सुरु लागि ड्रिफ्टहुड, ग्लास र अन्य मलबे देखि जलाशय को किनारमा खाली गर्न हुनेछ। अर्को तपाईं जहाज नेप्च्युन, जुन एउटा साधारण डुङ्गा वा रापट देखि निर्माण गर्न सकिन्छ सजाउनु गर्न आवश्यक छ। यो एक makeshift नाउ मा, मजा थियो शिविरमा नेप्च्युन दिन गर्न, तपाईं साँच्चै सिंहासन बनाउन सक्छ। राजा लागि आफूलाई आवश्यक, यो सजाने घाँस वा reeds संग कपडा remnants देखि एक सुट गर्न र प्रसिद्ध त्रिशुल र मुकुट बनाउन छ। Mermaids र समुद्री: को पाठ्यक्रम, तपाईं को समुद्र प्रभु को गठन को लागि वेशभूषा हेरविचार गर्नुपर्छ। तपाईं पनि कपडा, माटोको र reeds को remnants प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
Neptune दिन: लिपि
शिविरमा मा त्यो दिन सबै किनारमा मा भेला गर्न आवश्यक हुनेछ। को उत्तेजक संगीत मुनिका बच्चाहरु पर्व, को समुद्र र समुद्रहरू शासक को मुख्य अतिथि को आगमन पर्खिरहेका छन् - नेप्च्युन formidable। र आफ्नो Entourage संग समुद्र को किनारमा प्रभु आउँदै एक डुङ्गा मा चित्रित। Neptune जमीन तल, शोक र रिसाउने, पट्टाइ को उजुरी, आफ्नो त्रिशुल ट्याप। एक नृत्य प्रदर्शन मत्स्यांगना प्रस्ताव गर्न, र अन्त मा राजा को मूड सुधार छ, र मास्टर एक न्यायाधीश को भूमिका मा लिएर, एक छुट्टी मिलाउन नेप्च्युन सोध्छन्। प्रभु क्रम मा यस्तो लेखिएको छ र उत्सव सुरु गर्न प्रस्ताव। थप परिदृश्य जो सबै समूहका छोराछोरीलाई समावेश विभिन्न मजा प्रतियोगिताहरूमा र प्रतियोगिताहरु सामेल छन्।
दुई टोली लिएर को मजा। बच्चाहरु कहाँ त्यहाँ Mermaids मध्ये एक छ पारंपरिक ग्रेड, गर्न प्रस्थान, र पौडी खेल्न थाल्छन्। संकेत मा, दुवै टोली पानी सकिएको र छिट्टै किनारमा मा निर्माण छ। शिविरमा मा नेप्च्युन दिन तोकिएको ठाउँमा अप रेखामा सक्षम हुने टोलीमा छ जित्छ।
सहभागीहरू एक सर्कल गठन, पानी मा जानुहोस्। केन्द्र बल को सुतली संलग्न छ जो मा हात मा, एक समुद्री डाकू आउँछ। अग्रणी देखि एक संकेत मा खेलाडी को टाउको माथि बल स्पिन गर्न थाल्छ। टोलीमा गरेको कार्य - बल बाट बच्ने, पानी होमियो। हरेक गल्ती लागि एक टोली एक दण्ड बिन्दु सम्मानित गरिएको छ। त्यसपछि अन्य खेलाडीहरू स्वागत छ। शिविरमा मा नेप्च्युन दिन यो प्रतियोगिता मा अंक को एक सानो संख्या काम गर्नेछ भन्ने टोली छ जित्छ।
खेल "फाल्ने grenades"
यो प्रतियोगिता एक हात ग्रेनेड मा समातेर, एक निश्चित आदेशहरू पानी बाधा पौडी खेल्न गर्दछ। कार्य टोलीमा खेलाडीहरू सबै प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ। विजेता ड्राई दारिम को सबैभन्दा ठूलो रकम ल्याउन सक्ने टोली हो।
Neptune दिन छोराछोरीको शिविरमा संक्षेप, पुरस्कार विजेता डिप्लोमा र स्मरणीय उपहार समाप्त हुन्छ। अन्त्यमा नेप्च्युन को विजय आफ्नो Entourage साथ आफ्नो जहाज मा छोड्छ।
कसरी आफ्नो हात साथ नयाँ वर्षको लागि तालिका सजाने
जब रूस मा कुकुर ह्यान्डलरहरूको दिन छ
अन्तर्राष्ट्रिय दिवस पिज्जा: कहिले र कसरी मनाउन
बाल सदन मा मार्च 8 मा मनोरञ्जन: छुट्टी परिदृश्य, बधाई
जापान: सुधार र तख्तापलट d'etat
कसरी आफ्नो कम्प्युटरको हार्ड ड्राइभ र ल्यापटप परीक्षण गर्न?
कसरी नयाँ वर्ष को लागि आफ्नो रेस्टुरेन्ट मा ग्राहकहरु धेरै प्राप्त गर्न?
घर मचान-शैली: डिजाइन समाधान विशेषताहरु
स्पेन, Denia। प्रान्त कोस्टा ब्लैंका यो छ रूपमा
किन नयाँ वर्ष को सपना: सपना पुस्तक भविष्यमा बारेमा बताउँछ
लागि "Dolce Vita" Capri द्वीप
के तपाईको दिमागलाई प्रशिक्षण गरेर बिग्रिएको हृदयको उपचार गर्न सम्भव छ?
प्रयोग आवश्यकता: उपकरण ट्यांक लागि ग्राउंडिंग
डेटिंग साइट "प्रिये"। अनलाइन डेटिङ Darling.ru (eDarling) को समीक्षा